Farshaxanka Farshaxanka Guriga & Qurxinta Beerta Tooska ah -19: 00 PM, 25th. Juun (Waqtiga Beijing)
Saaxiibbadayda Qaaliga ah: Waxaan u samayn doonnaa durdur toos ah wax badan oo ka badan Resin Craft of Home & Garden Qurxinta Waqtiga waa: 19:00 PM, 25th. Juun (Waqtiga Beijing) Ku soo dhawow inaad daawato durdurkeenna tooska ah, oo aad la hadasho martida noo joogta goobta. Toos ugu noolaanshaha qolka socodka: https: //watch.alibaba.com/v/62d ...
Taambuugga Qaranka ee Sri Lanka wuxuu degay JD International
Warka ku saabsan Janaayo 25, Janaayo 21, xaflada caleema-saarka Sridong National Pavilion ayaa lagu qabtay xarunta Jingdong. Waxaa la soo sheegay in Sri Lanka Jingdong National Pavilion uu yahay taambuuggii qaran ee e-commerce ee ugu horreeyay ee ruqsad ka haysta Qaranka Sri Lanka ...